08/03/2012 Samy manana ny fomba entiny hankalazana ny andron�ny vehivavy ny mponina ao Antsirabe ny andron�ny 08 martsa, anio.
Raha ny fahitana azy dia tsy hita taratra ny firaisankina fa dia toa karazan’ny samy maka ho azy avokoa ireo fikambanam-behivavy misy ao Antsirabe satria na dia hetsika mitovitovy aza no atao dia samy manao ny azy. Any amin’ny Distrikan’i Mandoto, ohatra, no fankalazana rezionaly izay ny Faritra no mikarakara azy. Ny VVMV na ny Vehivevy Valo Martsa Vonona dia hiaraka amin’ny Minisitry ny Varotra Olga Ramalason ka ao an-drenivohitry ny Kaominina no hanao hetsika. Ny vady miaramila kosa dia hanao fitsidihina ny fonja anio maraina arahina fizarana fanomezana, ary ny kabinetra Raketamanga kosa dia hanomana seminera arahina adihevitra handrafetana tetikasa hampandrosoana ny vehivavy iarahana amin’ny Fokontany Tsarasaotra Antsirabe. Ireo no hetsika efa fantatra anio. Ho hita eo avokoa ny akon’ireo rehetra ireo. Ny irariana dia hitondra soa ho an’ny vehivavy tanteraka ny hetsika fa tsy ho kabary sy resaka fotsiny toy ny mahazatra.